Audiense Connect: ny sehatra marketing Twitter mandroso indrindra ho an'ny orinasa | Martech Zone
Na dia nandray ny fantsona media sosialy hafa aza ny ankamaroan'izao tontolo izao, dia mbola mpankafy Twitter be foana aho. Ary ny Twitter dia manohy manampy amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana mankamin'ny tranokalako manokana sy matihanina ka tsy hanome azy izany intsony aho atsy ho atsy!
Audiense Connect dia sehatra namboarina ho an'ny orinasa Twitter Marketing ary atokisan'ny marika sy masoivoho an'arivony manerantany:
Fitantanana sy famakafakana ny fiarahamonina - Makà vaovao marina momba ny fiarahamoninao ao amin'ny Twitter. Fantaro ny mpanaraka anao lalindalina ary mifampiresaha tsara amin'izy ireo
Chatbots & Broadcast - Miaraka amin'ny mpanorina Chatbot an'ny Audiense Connect, afaka mamorona chatbot opt-in anao ianao amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Midira mivantana amin'ireo mpamandrika / mpanjifanao.
Fanaraha-maso sy fihainoana mandroso - Fandraisana an-tsary ny tontolon'ny Twitter amin'ny fotoana tena izy sy tantara (nanomboka tamin'ny 2006). Audiense dia manome famakafakana resaka sy fikendrena fanentanana iray-tsindry.
Mpihaino voatsinjara Twitter ho an'ny doka - Mamorona mpijery namboarina manokana ho an'ny Twitter eo amin'ny tsena. Na firy na firy na firy ny mpihaino kendrenao. Ny fampifanarahana hatrany amin'ny kaonty Ads Ads anao.
Audiense Connect endri-javatra
Fotoana tsara indrindra handefasana tweet - Jereo hoe rahoviana ny fotoana mety indrindra handefasana bitsika sy araraoty ny tweet tsirairay nalefanao. Raiso ny fotoana bitsika tsara indrindra avy amina santionany mpampiasa ary ianaro rehefa eo amin'ny Internet ny mpihaino anao.
Jereo ny fiarahamonina Twitter-nao - Makà vaovao marim-pototra momba ny vondrom-piarahamoninao amin'ny alàlan'ny masontsivana samihafa, fantaro ny mpanaraka anao lalindalina ary mifampiresaha tsara amin'izy ireo. Saino izy ireo ary manitatra ny fampahalalana ao amin'ny Twitter.
Sivana, araho ary esory ny Twitter - Jereo ireo mpanaraka anao vaovao ary araho mora foana izy ireo. Mahaiza mandanjalanja. Avereno ity manaraka ity raha ny politikanao. Mitadiava namana mitabataba, mety ho spam, ary mpampiasa tsy miasa. Azafady mba jereo ny fitsipiky ny Twitter sy ny politikany.
Fanadihadiana amin'ny mpifaninana Twitter - Ampitahao amin'ireo kaonty Twitter hafa na mpifaninana aminao mba hahitanao hoe iza no manana mpanaraka bebe kokoa ary iza izy ireo, iza no mandefa bitsika bebe kokoa, izay am-bitsik'izy ireo amin'ny ankapobeny sns.
Mpijery Twitter sy fijerin'ny vondrom-piarahamonina - Raha te hahalala ny kalitaon'ny vondrom-piarahamoninao Twitter ianao dia ity no tatitra tonga lafatra: tabilao zara-potoana, tabilao misy fiteny, mpampiasa amin'ny isan'ny mpanaraka anao, mpampiasa amin'ny hetsika vao haingana, sns.
Tantano ny lisitry ny Twitter - Arindrao ny mpanaraka sy ny namanao amin'ny famoronana lisitra Twitter. Midira amin'ireo olona mifandraika amin'izany amin'ny fomba fifandraisana mahomby kokoa.
Mpanorina fitsipika momba ny automatisation Twitter - Mitsitsia fotoana amin'ny famoronana fitsipika mandeha ho azy rehefa misy olona manandanja aminao. Ohatra: mandefasa mailaka aminao raha misy olona manaraka anao maherin'ny 20,000 XNUMX hanaraka anao. Hendry, sa tsy izany?
Chatbots sy fampielezam-peo amin'ny hafatra mivantana Twitter - Miaraka amin'ny mpanorina Chatbot an'ny Audiense Connect, afaka mamorona chatbot misafidy ianao amin'ny tsindry vitsivitsy ary mifanerasera amin'ireo mpamandrika na mpanjifanao amin'ny alàlan'ny Twitter amin'ny alàlan'ny hafatra mivantana.
Tweet Analytics - Fenoy ny Analytics maimaimpoana izay omen'ny Twitter amin'ny fahatakarana tanteraka hoe iza no mandray anjara amin'ny bitsika tsaratsara kokoao. Ampio izy ireo amin'ny lisitra, na kendreo amin'ny alàlan'ny mpijery voalamina ao amin'ny Twitter amin'ny fampielezan-kevitra manaraka.
Tatitry ny intersection Twitter - Mitadiava fihaonan-dàlana misy dikany ary fantaro ny fifandraisana misy eo amin'ny mpihaino hahazoana ny fahiratan-tsaina ilainao hifantohana amin'ny mpihaino kendrena manokana. Jereo ny fahombiazan'ny paikady ara-tsosialin'ny tsirairay ary zahao izay kaonty avy amin'ny sehatra tsena mitovy manana mpampiasa mitovy aminy.
Tatitra Affinity Twitter - Ny Affinity Report dia manome fomba iray an-tsary hahalalana bebe kokoa ny tombontsoan'ny mpihaino anao ary hanapahana hevitra bebe kokoa momba ny atiny ho avy izay hanakoako sy hanintona an'ity mpihaino ity. Manaova tatitra momba ny firaisana (Affinity Report) hahitanao hoe iza ny mpanaraka no manaraka sy kely indrindra ao amin'ny Twitter.
Mpandrindra mpihaino Twitter mandroso - Mampifangaro haingana sy haingana ny safidy sivana amin'ny mombamomba ny mpampiasa, ny fifandraisana ara-tsosialy ary ny hetsiky ny mpampiasa mba hamoronana mpihaino tena manokana izay manatsara ny maha-zava-dehibe sy mahomby ny doka amin'ny Twitter sy Organic.
Fanaraha-maso ny Twitter - Fandraisana an-tsary ny tontolon'ny Twitter amin'ny fotoana tena izy sy tantara (nanomboka tamin'ny 2006). Audiense dia manome famakafakana resaka sy fikendrena fanentanana iray-tsindry.
Mpijery namboarina tamin'ny Twitter - Mamorona mpijery namboarina manokana ho an'ny Twitter eo amin'ny tsena. Na firy na firy na firy ny mpihaino kendrenao. Ny fampifanarahana hatrany amin'ny kaonty Ads Ads anao.
Andramo ny Audiense Connect
Tags: audiensemifandray audiensefotoana tsara indrindra hanaovana bitsikafanadihadiana momba ny bitsikaTwitterdokambarotra twittertatitra momba ny firaisana amin'ny twitterfamakafakana twitterfitantanana ny mpijery twitterTwitter Automationtwitter chatbotfahitana ny fiarahamonina twitterfitantanana ny vondrom-piarahamonina twitterfamakafakana mpifaninana twittertabilao twitterbot mivantana hafatra avy amin'ny twitterhafatra mivantana chatbot chatbottwitter arahotatitra momba ny fihaonambe twitterfitantanana lisitra twitterfanaraha-maso ny twitterfitsipika valinteny twitterfitsipika twitternamboarina manokana ny mpihaino twitterAza manara-dia ny twitter
Fepetra ny lahatsoratra mifandraika amin'i Jetpack amin'ny daty manokana